Ikheji yesimanje yokugcina endaweni yasemakhaya
Svorkmo, Trøndelag, i-Norway
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Ola
I-Stabbur kusukela ngekhulu le-19 okwathi ngo-2019 yavuselelwa ngokuphelele futhi yathuthukiswa yaba yindlu yesimanje enazo zonke izinsiza, kuyilapho kunakekelwa intelezi endala. Itholakala emaphandleni, okhunini oluncane epulazini i-Holtan, kumasipala wase-Orkland, cishe amakhilomitha angu-4 ukusuka eSvorkmo.
Ikheji yokugcina ifakwe i-inthanethi enesivinini esikhulu kanye ne-TV ngefayibha. Ikhishi liqukethe yonke into ikhishi lesimanje elingalindeleka ukuba libe nalo. Indlu yokugezela ifakwe ishawa ebanzi, yangasese ebekwe odongeni kanye nomshini wokuwasha.
4.97(93 okushiwo abanye)
4.97 · 93 okushiwo abanye
Bude buduze nomnyango ongaphambili ungahlangana nemikhovu nezinkomo. Akhona namathuba okuhamba kahle "unqamula inkundla" lapho udoba khona mahhala e-Håggådammen nasemfuleni i-Vorma. Futhi ayikude kakhulu nomfula odumile we-salmon i-Orkla, enemikhomo eminingi emihle ungathengela amalayisense okudoba.
UOla Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Svorkmo namaphethelo